सुत्केरी छोइछिटो र स्वास्थ्य |
सुत्केरी छोइछिटो र स्वास्थ्य
प्रकाशित मिति :2016-07-17 14:55:39
धर्मसिन्धुमा गर्भवतीका श्रीमानले महिलाको विशेष ख्याल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गर्भवती, सुत्केरीलाई सजिलो हुने गरि नैऋत्य (दक्षिण, पश्चिम) कोण बनाएर सुत्ने कोठा बनाइदिनुपर्छ ।
काठमाडौं । आलापोटकी कल्पना बस्नेतको कान्छो छोरालाई सामान्य छाती दुख्यो भन्ने बित्तिकै अस्पताल कुदाई हाल्नुपर्छ । कल्पनाको छोरा निमोनियाका बिरामी हुन् । बेला-बेला बल्झिरहन्छ । ‘सुत्केरीमा २१ दिनसम्म चिसो भुइँमा बस्नुको नियती अहिले मेरो छोराले भोग्दैछ’ कल्पनाले भनिन् ।
कल्पनाको परिवारमा सन्तान जन्मिएपछि सामान्यतया ११ दिनसम्म पराल ओछ्याएर पातलो डस्नामा सुत्केरीलाई भुइँमा सुताउने प्रचलन छ । कल्पनालाई पनि त्यही गरियो । तर, ११ औं दिन हुनुअघि नै बस्नेत कुलमा एक व्यक्तिको मृत्यु भयो । त्यसपछि फेरि एउटी महिला सुत्केरी भइन् । ‘मैले छोरा जन्माएको ११ दिन नपुग्दै जुठो, सुतक पर्‍यो त्यसपछि म कुनाको कुनामैं भएँ ।’ कल्पनाले थपिन् ‘चिसोले पराल ढुसी आइसकेको थियो । छोराले दुध चुस्न पनि छोडेको थियो । श्रीमान् र सासुससुरास“ग छोरालाई चिसो लाग्यो भनें । उहाँहरूले कुनाबस्दा बच्चाको छिनछिनमा रोगन (रंग) फेरिन्छ भनेर वास्तै गर्नुभएन । जुठो, सुतक चोखिएपछि २१ दिनमा बल्ल चोख्याइयो ।’ बच्चाको न्वारन गरेर भोलिपल्ट अस्पताल लैजाँदा त डबल निमोनिया भइसकेको रहेछ । महिनादिनसम्म अस्पताल राखेपछि बल्ल छोरालाई निको भयो । कल्पना भन्छिन् ‘सुत्केरीमा ममाथि गरिएको छोइछिटोले म मात्र हैन, मेरो छोराले पनि जीवनभर दुःख पाउने भयो ।’
हिन्दु परम्परा अनुसार महिला सुत्केरी भएपछि उसलाई सामान्य अवस्थामा जस्तो छुने गरिँदैन । उसलाई भान्छामा जाने, परिवारका सदस्यलाई छुने वा आफूलाई मन लागेको खानेकुरा निकालेर खाने पनि छुट हुँदैन । सुत्केरीलाई कम्तिमा ११ दिनसम्म पराल ओछ्याएर पातलो ओछ्याउनेमा भूँईमा सुताउने प्रचलन अझै छ ।
काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ७, आलापोटकी गीता नगरकोटी सुत्केरी भएको सात महिना लाग्यो । सुत्केरी भएकोे ६ दिनसम्म भूँइमा सुतिन् । ६ दिनसम्म उनले खाने भाँडा पनि बेग्लै थियो । उनले खाएको थाल, कचौरा परिवारले छोएनन् । न त गीताको श्रीमानले नै छोए । ‘मैले त ५ महिनासम्म घरमा पुजाकोठामा छिर्न पनि पाइनँ,’ गीता भन्छिन् ‘५ महिनामा छोरीको पास्नी गरेपछि मात्रै पुजा गर्ने छुट भयो ।’
गर्भावस्था र सुत्केरी अवस्था महिलाको विशेष अवस्था हो । यतिबेला उनीहरूलाई विशेष हेरचाह, पोषिलो खानेकुरा, नरम न्यानो ओछ्यानलगायतको आवश्यकता पर्छ ।
आलापोट स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज जगत नेपालीका अनुसार गर्भवती र सुत्केरी अवस्था त असामान्य अवस्था हो । यस्तो बेला उनीहरूको शरीरमा विशेष हर्मोन उत्पादन हुन्छ । राम्रो भइरहेको अवस्थामा पनि उनीहरूमा आफूले नराम्रो गरें की भन्ने जस्ता नकारात्मक भावना आउने गर्छ । यस्तो बेला उनीहरूलाई विशेष हेरचाह पुगेन भने बच्चाको घाँटी थिच्ने, असामान्य व्यवहार गर्ने, अन्ततः मानसिक रुपमा समस्या आउने पनि हुन सक्छ । नेपाली भन्छन् – ‘सबैभन्दा धेरै त यस्तो बेला श्रीमानले सहयोग गर्नुपर्छ । धर्म संस्कारका नाममा अछुतको व्यवहार गरियो भने महिला र वच्चालाई पछिसम्म असर पर्न सक्छ ।’
तर, सामान्य परिवारका महिलाले मात्रै होइन सेलिब्रेटीले पनि गर्भावस्था र सुत्केरी अवस्थामा अनावश्यक छोइछिटो र सामाजिक अपहेलना भोगेका उदाहरण छन् । पूर्व मिस नेपाल सुगरिका के.सीले पनि गर्भवती र सुत्केरी हुँदा अपमानको बोध गर्नुपर्‍यो । सुगरिका आमा बनेको साढे २ वर्ष भयो । गर्भवती भएको ६ महिना कटेपछि सुगरिकाले पूजा गर्न छाडिन् । ‘पूजा गर्‍यो भने गर्भमा असर पर्छ भन्थे । पहिलो गर्भ त्यसमाथि पनि नराम्रो भयो भने ! सुगरिकाले थपिन् ‘पूजा गर्दा गर्भको सन्तानलाई असर पर्ला भन्ने मनमा डर भएकोले मैले पूजा गरिन् ।’
त्यतिमात्रै कहाँ ! गर्भवती हुँदा कोही ‘तिम्रो त चुच्चो पेट छ छोरै हुन्छ, कोही अलि थेप्चो रैछ छोरी पाउँछ्यौ की ?’ भन्न आइपुग्थे । यस्ता कुराले मानसिक तनाव झेल्नुप¥यो उनले । बच्चा ठूलो भएकाले शल्यक्रिया गरेर सुगरिकाले सन्तान जन्माइन् । त्यसपछि अर्को सामाजिक टिप्पणी, ‘शल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्माएको पनि कतै असली आमा हुन्छ !’ यस्तो टिप्पणीले मानसिक रुपमा निकै विचलन आएको के.सीको अनुभव छ ।
सुत्केरी भएपछि भने उनले आफ्नै ओछ्यानमा सुत्न पाइन् । भुइँमा वा छुट्टै ओछ्याउनेमा सुत्नु परेन । यद्यपी, दुध आउने नआउने कुरालाई लिएर पापी, धर्मात्मा भन्नेलगायतका कुरा झिना मसिना लाग्ने, तर मानसिक रुपमा महिलालाई विचलित गराउने टिप्पणीले सुगरिकालाई धेरै नै दिक्क बनायो । सुगरिका समाजलाई प्रश्न गर्छिन् – ‘सुत्केरीलाई छोयो भने सुनपानी छर्नुपर्छ भन्ने समाजमा नवजात शिशुलाई छुनुअघि साबुन पानीले हात धुने बानी कहिले बस्ला ?’
गर्भवती हुँदा परिवारमा कुनै दुर्घटना भयो भने त जीवनभर ति महिला र गर्भको सन्तानलाई परिवारको दुर्घटनाको दोषीका रुपमा उभ्याइने परम्पराले महिला कति अपहेलनामा बाँचेका छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । यसैको एक उदाहरण हुन् गीता ढकाल । उनले आफूले १७ वर्षको उमेरमा छोरा जन्माएकी थिईन् । सुत्केरी हुन डेढ महिनाअघि श्रीमानको दुर्घटनामा मृत्यु भयो । भक्कानिदै गीता भन्छिन्, ‘मेरो छोराको न्वारन गर्न समेत कोही आएनन् ।’ नजिकैका आफन्तको सहयोगमा न्वारन गरेपनि उनको र छोराको नागरिकता समेत परिवारका सदस्यले नबनाइदिएको उनले बताइन् । ‘मेरो श्रीमान् मर्नुको पछाडि छोरा र मेरो के दोष थियो ?’ उनी भन्छिन् ‘८ महिनाकी गर्भवती मलाई श्रीमान् मर्नुको कारण थोपरेपछि मैले कति कष्ट सहनुपर्‍यो होला ।’
गर्भवतीले बाटो हिँड्दा समेत अपमान खेप्नुपर्ने अवस्था छ । किर्तिपुर मच्छेगाउँकी ललिता अधिकारीले पहिलो पटक गर्भवती हुँदा यस्तै भोग्नुपर्‍यो । गर्भवती भएको ८ महिनामा बाटोमा हिँडिरहँदा छिमेकीले नाती बोकेर आएकी रहिछन् । ‘मेरो नाती नछोउ, रुन्चे लाग्छ.भनिन्’, त्यतिबेला ललितालाई आफू पूरै अछुत पो रहेछु की भन्ने पनि परेको थियो । ललिताको ४ महिनाको छोरा र ५ वर्षकी छोरी छन् ।
गर्भावस्था र सुत्केरी अवस्थामा धार्मिक संस्कारलाई कारण देखाएर पारिवारीक र सामाजिक छोइछिटो गर्ने परम्परा समाजमा अझै छ । घरमा नयाँ सदस्यको आगमन हुनु खुसीको कुरा हो । तर, सुत्केरी भएको घरलाई बिटुलो मानिन्छ । महिलालाई मन्दिर जान, पूजा गर्न, नवजात शिशुलाई परिवारकै अन्य सदस्यले छुन समेत दिर्इंदैन । वाल्मिकी विद्यापीठ धर्मशास्त्र विभागका प्रमुख प्राध्यापक डा. देवमणी भट्टराई भन्छन् , ‘धर्मशास्त्रले महिलालाई अछुत व्यवहार गर्नु भनेकै छैन ।’ धर्मसिन्धुले गर्भवतीको स्याहार गर्नका लागि उनका पतिले पालना गर्नुपर्ने धर्म र गर्भवती महिलाले आफूलाई ख्याल पुर्‍याउने कुराहरूको व्याख्या गरेको उनले बताए ।
धर्मसिन्धुको परिच्छेद ३ मा उल्लेख गरिएअनुसार गर्भवती महिलाका श्रीमानले महिलाको विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । गर्भवती सुत्केरीलाई सजिलो हुने गरि नैऋत्य (दक्षिण, पश्चिम) कोण बनाएर सुत्ने कोठा बनाइदिनुपर्छ । तर, समाजमा भने विशेष ख्याल गर्नुपर्ने कुरालाई गलत व्याख्या गरिएको उनले बताए ।
सुत्केरी भएको कम्तिमा ४५ दिनसम्म महिला तङ्ग्रिन समय लाग्ने भएकाले उनलाई कम काम लगाएर, विशेष हेरचाह गर्नुपर्ने धर्मशास्त्रले व्याख्या गरेको भएपनि तिनै कुराको गलत व्याख्या भएको उनले बताए । यद्यपी, सुत्केरी हुँदा कम्तिमा ११ दिनसम्म भने परिवारका ७ पुस्तासम्मले पूजामा सरिक हुन नहुने उनले बताए । सबैको ध्यान महिलाको स्याहारमा पुग्ने भएकोेले पनि यो समयमा अन्य चाडबाड मनाउन नहुने उनको तर्क छ ।